ဒီနတေ့ဈရကျပဲ လှမျးတော့မယျ …. – Shinyoon
ဒီနတေ့ဈရကျပဲ လှမျးတော့မယျ ….
December 31, 2020 by Shin Yoon
ကိုယျ့ကိုကြောခိုငျးပွီး တခွားရငျခှငျမှာပြျောနတေဲ့သူ့ကို ဒီနတေ့ဈရကျပဲလှမျးတော့မယျ မနကျဖွနျထိချေါမသှားတော့ဘူး … အဟောငျးမို့မပေ့ဈလိုကျတော့မယျဆိုတာမြိုးမဟုတျပဲ ကိုယျပြျောအောငျနဖေို့သငျ့ပွီလို့တှေးမိလို့သာ မဖေို့တှေးလိုကျတာပါ
မနကျဖွနျ ကိုယျ့စိတျနဲ့ကိုယျထတော့မယျ မနကျဖွနျ ကိုယျ့အကွောငျးကိုယျတှေးတော့မယျ မနကျဖွနျ ကိုယျ့အိပျမကျတှေ ကိုယျဆကျမကျတော့မယျ ပွနျမလာတော့မယျ့ လူကို လှမျးနတေယျဆိုတာ ကိုယျ့ကိုယျကို နှိပျစကျနရေုံသကျသကျပါပဲ
ကြှနျမ မပြျောဖွဈခဲ့တာ အခြိနျကွာခဲ့သလို သူမနေ့ခေဲ့တာလဲ ကိုယျမရှိတဲ့အခြိနျတိုငျးပဲလေ … ဒီနတေ့ဈရကျပဲ သူ့ကို လှမျးတော့မယျ ဒီကတိကို ဘယျသူ့ကိုမှ မပေးဖွဈခဲ့ပမေယျ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုတော့ အကွိမျကွိမျ သတိပေးခဲ့ပွီးသားပါ ….
သူ အဆငျပွရေဲ့လားလို့ တှေးမယျ့အစား ကိုယျအဆငျပွရေဲ့လားလို့တှေးတော့မယျ သူပြျောရဲ့လားလို့ တှေးမယျ့အစား ကိုယျတကယျနလေို့ပြျောရဲ့လားဆိုတာ ဆငျခွငျမှဖွဈတော့မယျ ကိုယျအရေးမပါတဲ့အရပျမှာ အခြိနျအကွာကွီး ရပျနရေုံနဲ့အရေးပါလာတာမှမဟုတျပဲလေ ….
တျောပါပွီ … ဒီနတေ့ဈရကျလှမျးပွီးသှားရငျ သူ့ကို တဈသကျလုံးမပေ့ဈလိုကျဖို့ တှေးထားတယျ ….
ဒီနေ့တစ်ရက်ပဲ လွမ်းတော့မယ် ….
ကိုယ့်ကိုကျောခိုင်းပြီး တခြားရင်ခွင်မှာပျော်နေတဲ့သူ့ကို ဒီနေ့တစ်ရက်ပဲလွမ်းတော့မယ် မနက်ဖြန်ထိခေါ်မသွားတော့ဘူး … အဟောင်းမို့မေ့ပစ်လိုက်တော့မယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ကိုယ်ပျော်အောင်နေဖို့သင့်ပြီလို့တွေးမိလို့သာ မေ့ဖို့တွေးလိုက်တာပါ
မနက်ဖြန် ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ်ထတော့မယ် မနက်ဖြန် ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်တွေးတော့မယ် မနက်ဖြန် ကိုယ့်အိပ်မက်တွေ ကိုယ်ဆက်မက်တော့မယ် ပြန်မလာတော့မယ့် လူကို လွမ်းနေတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှိပ်စက်နေရုံသက်သက်ပါပဲ
ကျွန်မ မပျော်ဖြစ်ခဲ့တာ အချိန်ကြာခဲ့သလို သူမေ့နေခဲ့တာလဲ ကိုယ်မရှိတဲ့အချိန်တိုင်းပဲလေ … ဒီနေ့တစ်ရက်ပဲ သူ့ကို လွမ်းတော့မယ် ဒီကတိကို ဘယ်သူ့ကိုမှ မပေးဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ အကြိမ်ကြိမ် သတိပေးခဲ့ပြီးသားပါ ….
သူ အဆင်ပြေရဲ့လားလို့ တွေးမယ့်အစား ကိုယ်အဆင်ပြေရဲ့လားလို့ တွေးတော့မယ် သူပျော်ရဲ့လားလို့ တွေးမယ့်အစား ကိုယ်တကယ်နေလို့ပျော်ရဲ့လားဆိုတာ ဆင်ခြင်မှဖြစ်တော့မယ် ကိုယ်အရေးမပါတဲ့အရပ်မှာ အချိန်အကြာကြီး ရပ်နေရုံနဲ့အရေးပါလာတာမှမဟုတ်ပဲလေ ….
တော်ပါပြီ … ဒီနေ့တစ်ရက်လွမ်းပြီးသွားရင် သူ့ကို တစ်သက်လုံးမေ့ပစ်လိုက်ဖို့ တွေးထားတယ် ….
လူတခြို့က ပွောငျးလဲသှားကွတာ မဟုတျပဲ မကျြနှာဖုံးတှေ ကှာကလြာရုံပါ…